Nagu saabsan - ZNZK
Sichuan Zhongneng Teknolojiyada Ilaalinta Deegaanka Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo diiradda saareysa cilmi baarista sayniska, qaabeynta, wax soo saarka, rakibaadda iyo adeegyada farsamo ee "musqulaha faaruqinta". Iyada oo tikniyoolajiyad qaan ah iyo naqshad hodan ah iyo khibrad dhisme, ZNZK had iyo jeer waxay safka hore uga jirtaa cilmi-baarista alaabada nidaamka musqusha ee Shiinaha.
ZNZK wuxuu u gudbiyay alaab-qeybiyeha ugu weyn ee musqusha faaruqinta ah ee Shiinaha. Iyadoo 500 + rakibaadda qaran ahaan, injineerada naqshadeynta ZNZK iyo maareeyayaasha mashruuca ayaa ku lug lahaa mashaariic badan oo kala duwan oo caqabado deegaan iyo injineernimo kala duwan ah. Khibradayada ballaadhan kuma koobna naqshadeynta, cilad bixinta iyo dayactirka nidaamyada. Waxaan marwalba idinla joognaa bilow ilaa dhamaad, naqshadeynta ilaa howlgalka.
ZNZK wuxuu raacaa ISO9001 iyo ISO14001. ZNZK waxay siisaa barnaamijyo tababar xirfadeed macaamiisha wax iibsiga iyo rakibidda nidaamyada musqusha faaruqinta ah, iyo sidoo kale kormeer xilliyeed inta lagu jiro rakibidda iyo adeegga iibka kadib oo heer sare ah.
Soo-saaridda: 25 taariikhaha shaqada
Maraakiibta caalamiga ah: konteenar ahaan
Nidaamka musqusha ee faaruqinta ah
xallin karaa dhibaatooyinkan aad la kulanto
Si fudud loo barafeeyo
Xalka-Sababtoo ah musqusha fayadhowrka u fiican bay'ada ayaa nuugaysa wasakhda iyada oo loo marayo cadaadiska hawada, tuubbada wasakhda adag waxay gaari kartaa gobolka "biyo la'aan", dheeri ah, dahaadhka labaad ee ku xiran tuubada biyaha laga soo galo iyo tuubada bullaacadaha, taas oo gebi ahaanba hubisa in musqusha waxay ku jirtaa jawi qabow (-40 ℃) jawigu wuu shaqeyn karaa.
Biyo ma soo galaan
Xalka-Waxaa ku jira haanta keydka biyaha yar ee 1.5 m3 nidaamka, isticmaalka biyaha ee wasakhda bey'ada u fiican ayaa ka yar 0.5L / jeer, waxaa loo isticmaali karaa 3000-4000 jeer.
Maaddaama suuliga faakiyuumka u habboon bey'adda u adeegsado biyo ka yar isla markaana leh qashin adag oo xoogaa yar, looma baahna in la naqshadeeyo balli ballaaran oo xaarka ah si qashinka loo ururiyo. Taangi yar oo 3m3 qashin ah ayaa lagu rakibi karaa qolka, kaas oo la kulmi kara 3000-4000 jeer oo isticmaalka ah.
Biyo la'aan ama ay adagtahay in la nadiifiyo
Xalka-Sirdoonka fog-waqtiga dhabta ah xakamaynta nidaamka biyo-gelinta gudaha iyo nidaamka bullaacadaha ee musqusha kasta. Markii ay biyuhu ku filnaadaan ama haanta bullaacadaha ay qarka u saaran tahay inay qarqiso, nidaamku si otomaatig ah ayuu u yeerayaa. Meelaha musqulaha dadweynaha ay aad ugu baahsan yihiin, waxay ku habboon tahay maareynta musqusha.
U baahan tahay in si joogto ah loo dhaqaajiyo
Xalka-Maaddaama qalabka nidaamka musqulaha faakuumku uu ku dhexjiro jirka qolka, musqusha waa mid aad u dhaqdhaqaaq badan oo fudud in la qaado
Baahan meesha lagu rakibay waxay leeyihiin jaranjaro
Xalka-Maaddaama musqulaha faakuumku u isticmaalaan cadaadis taban inay noqdaan isha korontada. Nidaamka rakibidda dhuumaha ayaa raaci kara qaab-dhismeedka bannaanka, qadka toosan, qaloocsan, iyo xitaa jihooyinka kor iyo hoos. Runtii waa la rumeeysan yahay in "biyuhu kor ugu sii socdaan"